olow halkey ka keeneen inay u diidaan ama kaga digaan gabdhahooda galmada foorarsiga?, - iftineducation.com
iftineducation.com – Maalmahaan waxaa la sheegaa naagaha ku nool dalalka yurub ee soomaalida ah waxay kula dardaarmaan gabdhahooda marka ay guursadaan ninka inaysan u foorarsani
Inkastoo uu yahay foorarka mid xalaal ah oo aan laysku haysanin, tolow halkey ka keeneen inay u diidaan ama kaga digaan gabdhahooda galmada foorarsiga?.
Sheekadan aad bay u faafsan tahay waxaa dhici karto foorarka inuu keeni karo -sida ay u haystaan- galmada dabada, waayo ninka marka uu foorariyo naagta waxaa u muuqanaya labada dalool iyagoo is dul saaran.
Marka waxaa laga yaabaa inuu galiyo midkooda, laakin waxaan dhihi lahaa taas ma reebi karto galmada foorarka, waayo siilka ayuu ninka gelinayaa ee futada ma aha.
Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay naagta soo baratay galmada gadaal marka ay foorarsato dabadeeda is furto oo uu ninka dareemo inay rabto nin gadaal laga cuno, waayo naagaha gadaal dhiibto waxaa lagu gartaa futada afkeeda ayay ka yeelanayaan calaamo sidoo kale marka laga taabto way dibcaysaa wayna is furaysaa dabadeeda, marka ninka sidaa uu ku barto.
Garoobada Iyo ceebtooda ugu weyn